Thursday, 21 Jan, 2021 12:00 PM
मधेशी समुदायबाट राजनीतिमा आउन महिलालाई कम चुनौती छैन । ती सबै चुनौतीको सामना गर्दै कमैमात्र मधेशी महिलाले राजनीतिलाई निरन्तरता दिएका छन् । त्यसमा पनि धनाढ्य परिवारका मधेशी छोरी, बुहारीको सहभागिता त राजनीतिमा झनै न्यून छ ।
यस्तै चुनौतीको सामना गर्दै, विद्यार्थी जीवनदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय जुली महत्तो यतिबेला महत्वपूर्ण जिम्मेबारी सम्हाल्दै हुनुहुन्छ । नेकपाबाट पहिलो क्याबिनेट मधेशी महिला मन्त्री हुने अवसर पाउनुभएकी महत्तो प्राप्त जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक संचालन गरिरहनुभएको छ । उहाँ अहिले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री हुनुहुन्छ । मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्राप्त भएसँगै महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांङ्गका क्षेत्रमा उहाँले के कस्ता नयाँ योजनाहरु अगाडि ल्याउनुभएको छ त ? मन्त्री महत्तोसँग चक्रपथ डटकमले गरेको संवाद :
नेकपाबाट नै पहिलो पटक मधेशी महिलामन्त्री बन्ने अवसर पाउनुभएको छ, महिला बालबालिकाको क्षेत्रमा नयाँ योजना के के बनाउनुभएको छ ?
सरकारले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा जिम्मेवारी दिएर पठाएको छ । यसलाई पुर्ण रुपमा अगाडि बढाउँछु । यस अन्र्तगत ४ वटा क्षेत्र महिला, बालबालिका, अपांङ्गता र ज्येष्ठ नागरिकका क्षेत्रमा कामगर्नुपर्ने भएकाले यो धेरै संवेदनशिल छ । त्यस्तै हामीले सडकमा भएका बालबालिका सहित ज्येष्ठ नागरिकलाई मुक्त गरेर सम्मानजनक ठाउँमा ल्याएर उहाँहरुको संरक्षण गर्ने भन्ने छ । महिलालाई उद्यमशीलता बनाउने कुरा, उहाँहरुलाई आर्थिक निर्भर गराउने कुरा । एसिड हान्नेहरुका लागि कडा कानुन आयो, मेलमिलाप गर्नेलाई कडा कानुन बनाएको छ । महिला आयोगमा ११४५ को हेल्प लाइनमा हिंसामा परेका दिदी बहिनीले फोन गरेमा तत्कालै उद्धार गर्ने व्यवस्था छ । यी सबैका बाबजुद मैले महिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पहिलो निर्णय हेलिकप्टरमा उद्धार गरिएका सुत्केरी दिदीबहिनीहरु घर फर्किदा बीस हजार रुपैया दिने व्यवस्था गरेको छु । उपचार गराउन काठमाडौं आइसकेपछि फर्किने समयमा समस्या हुनेभएकाले बिपन्न महिलालाई आर्थिक समस्या नहोस भन्नका लागि त्यो लागु भएको छ । त्यस्तै मन्त्रालयले अब सुत्केरी महिलाको उद्धार कार्यक्रम अन्र्तगत ७ प्रदेशमा नै जोड्ने योजना पनि बनाएको छ । पहिला हिमाल पहाडमा समस्या भएकालाई मात्रै उद्दार गर्ने व्यवस्था थियो अब सातै प्रदेशमा जोडने प्रयासमा छौ ।
तपाईले भन्नुभएको सही हो, म नै नेकपाबाट पहिलो पटक मधेशी महिलामन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गरेको छु । यसअघि हाम्रो पार्टीबाट मधेशी महिला क्याविनेटमन्त्री हुने अवसर कसैले प्राप्त गरेको थिएन । अरु पार्टीबाट त हुनुभएको थियो तर हाम्रो पार्टीमा म नै पहिलो महिला क्याबिनेट मन्त्री हो । त्यस कारण सरकारले पत्याएर पहिलो मधेशी महिलालाई यति ठुलो जिम्मेवारी दिएकोे छ मैले त्यसलाई राम्रोसँग पुरा गर्ने अठोट गरेको छु । मन्त्रालय सानो ठुलो भन्ने हुँदैन । महिला मन्त्रालयलाई अलि हेलाको मन्त्रालयका रुपमा लिने गरिएको छ तर म यहाँ आइसकेपछि यो मन्त्रालयको आकर्षण बृद्धि गर्ने अभियानमा लाग्ने छु । तपाईहरु ढुक्क हुनुस हेर्देजानु होला म यो मन्त्रालयमा आउँ आउँ लाग्ने बनाउँछु ।
तपाई आइसकेपछि देखिने कार्यक्रम अन्र्तगत मन्त्रालयले के के गरिरहेको छ ?
अहिले हामीले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम मार्फत सुत्केरीको उद्धार गर्ने । उपचार गर्न नसक्ने, ज्यान जोखिम भएका सुत्केरीको अस्पताल नजिक नभएको, हस्पिटल जाने बाटोघाटो नभएको त्यहाँ सम्म पुग्न नसक्ने दिदी बहिनीहरुलाई हेलिकप्टरबाट यो मन्त्रालयले उद्धार गरेर काठमाडौंमा ल्याएर उपचार गर्ने गरेका छौ । उपचारपछि फर्किदा बीस हजार रुपैया आर्थिक सहयोग गरिरहेका छौ । अर्को मैले गर्नुपर्ने कामको सूचीमा बाध्यताले यौनधन्दामा लागेका दिदी बहिनीहरुको सम्मान जनक व्यवस्थापनपनि हो, मैले त्यसका लागि पनि काम अगाडि बढाइरहेको छु । कसरी त्यो क्षेत्रमा लागेका महिलाहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ मेरो ध्यान गएको छ । छिटै नै त्यसका बारेमा पनि म केही पहलकदमी लिनेछु । अरु भनेको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांङ्गको क्षेत्रमा त गर्नुपर्ने कामहरु धेरै छन् ।
यहाँले भन्नुभयो राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्र्तगत नै सुत्केरीको उद्धार कार्य यो मन्त्रालयबाट पनि भईरहेको रहेछ । त्यो हेलिकप्टर किन्ने समयमा राष्ट्रपतिलाई निकै नै विवादमा ल्याउन खोजिएको थियो । राष्ट्रपतिले यति करोडको हेलिकप्टर किन्न लागे भनेर नकारात्मक प्रचार पनि भयो अहिले यो हेलिकप्टर आपतकालिन उद्धारमा काम लागेको छ । त्यो विवाद, अनि यो कार्यलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
यो एकदमै गलत प्रचार हो । राष्ट्रपतिले हेलिकप्टर किन्ने होइन, देशले किन्ने हो । किनभने राष्ट्रपति भनेको देशको हो । राष्ट्रपतिले म आफु हेलिकप्टर किन्छु भनेको पनि होइन देशलाई आवश्यकता भयो किन्यो । यस्तो निर्णय कार्यकारिणी सरकारले गर्ने हो । यसमा उहाँलाई जोडनु व्यर्थ हो । यो भ्रमपूर्ण प्रचार हो । यहाँ त राष्ट्रपतिले आफनो निजी प्रयोगका लागि हेलिकप्टर किन्यो भने जसरी प्रचार गरियो ।
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम यो त एउटा नाम मात्रै हो । एउटा उच्च संस्थाको नाम प्रयोग गरेको हो यहाँ त यहि नामलाई लिएर राष्ट्रपतिले नै प्रयोग गर्न लियो भने जसरी प्रचार हुने गरेको छ । हामीले यो बुझाउन सकेकै छैनौ कि या बुझेर पनि नबुझेको जस्तो गर्या हो केहि भन्न सकिएन । शिर्ष व्यक्ति भएको भएर उहाँको योजनाको नाम मात्रै हो, राष्टपति महिला उत्थान कार्यक्रम, राष्टपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रपति खेलकुदका कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री प्रतियोगिता भन्छन त्यो त शिर्ष व्यक्तिको सम्मानका लागि राखिएको नाम हो । उहाँले त्यसमा केहि गर्न मिल्ने होइन । अहिले त्यो हेलिकप्टर भएका कारण दुःखमा परेका महिलाको उद्धार भएको छ । एउटा उच्च संवैधानिक निकायमा बस्नुभएको उहाँलाई त थोरै अधिकार दिएको छ । कार्यकारिणीले जे सिफारिस गर्छ उहाँले सदर गर्ने हो । त्यसले गर्दा जति गाली गर्नुछ, सच्याउनु छ, कार्यकारिणीलाई गर्नुस्न ? तर सरकारले यति राम्रा राम्रा काम गरिरहेको छ । त्यो कहिल्यै नदेख्ने खाली गाली गर्नका लागि गाली त जतिपनि गर्न सकिन्छ । कहिल्यै राम्रो काम गरयो भनेको सुन्नु भएको छ ? धरहरा कस्ले बनायो भन्दा, सिकर्मी डकर्मीले भन्ने पुर्व प्रधानमन्त्रीहरु छन् । अनी रानी पोखरी कस्ले बनायो यो त इन्जिनियरले बनायो भन्ने नेताहरु छन् । प्रधानमन्त्रीको दृढ शक्ति केही गरौं भन्ने छ । सरकार त पहिलाका पनि कति आए, कति गए परिर्वतन के भएको थियो त ? त्यो त सवैसामु छर्लङ्गै छ नी ।
राष्ट्रपतिमाथी पछिल्लो समय किन यति धेरै आक्रमण भइरहेको छ ?
पुरुष चिन्तन भएकै कारणले आक्रमण भएको हो । हाम्रो देशमा महिला राष्ट्रपति भएकै कारणले अलि बढिनै आक्रमण भइरहेको छ । यो सवै महिला भएको कारणले नै भएको हो । महिला भएकै कारणले आफुलाई बिद्धान ठान्नेहरुले कतिसम्म भनेका छन त्यो त मैले भनिरहनु पदैन । यो अपराधिक मानसिकता भएकैले यसरी बोल्छन र यस्ता मान्छेहरुको हातमा देश गयो भने के हुन्छ भनेर जनताले सोच्ने बेला पनि भएको छ । किनभने एउटा सर्वोच्च निकायमा बसेको महिला हुन या पुरुष यो गाली उहाँलाई मात्रै गरेको होइन ५१ प्रतिशत महिलालाई गाली गरेका हुन । आफ्नै आमा दिदी बहिनीलाई गाली गरेका हुन् । कुनै पुरुष आमा नभई देशमा जन्मिएको छैन । यो गाली उनीहरुले आफैलाई गरेको हो र जस्ले यस्तो गाली गरिरहेको छ उस्को दिमाग बिग्रिएकै हो भन्छु म ।
यस्तो नारा लगाउनेहरुलाई तपाईहरुले अहिलेसम्म पनि कारबाही गर्न सक्नु भएको छैन नी ?
हामीले ध्यानाकर्षण गराएका छौ, मैले क्याबिनेटमा कुरा राखेको छु । ध्यानाकर्षणा भएको छ । समाजमा सबै अपराधी होइन, केहि व्यक्तिहरुले यो अपराधिक कार्य गरिरहेका छन् । सम्बन्धीत निकायका मन्त्रीले त्यस्ता उच्श्रृखल गतिविधि गर्ने, नारा लगाउनेलाई कारबाहि गर्नुहुन्छ त्यो प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ ।
थोरै प्रसंग बदलौं, मन्त्रिमण्डल फेर बदल हुँदैछ भन्ने त ५/६ महिना अगाडि देखिनै चर्चा थियो तर तपाईको नाम खासै चर्चामा थिएन । तपाईलाई चाहि मन्त्री हुँदैछु भन्ने जानकारी कतिबेला भयो ?
म मन्त्री हुने दिन आफ्नै काममा दिनभर नै व्यस्त थिए । देश असाधारण घडिमा थियो । यस्तो समयमा म आजै मन्त्री हुन्छु भन्ने मैले सोचेको नै थिएन । अरु बेला मन्त्री बन्ने समयमा चाहि मेरो नामको चर्चा हुन्थ्यो । तर यस्तो असाधारण अवस्थामा म हुन्छु भनेर त सोचेकै थिएन । सातबजे सपथ थियो तर ६ बजे राजेश जीले बालुवाटारबाट फोन गर्नुभयो शितल निवास आउनुस भन्नुभयो । ६ बजे फोन गरेर ६ः३० मा पुग्नु है भन्नुभएको थियो । मैले किन ? भने राजेश जीले मलाई केही थाहा छैन उता पुग्नुस न त्यही थाहा होला भन्नुभयो । मलाई त बाटोमा खुब खुल्दुली भयो । मन्त्रालयको नाम पनि थाहा छैन । शितल निवास पुग्दा सवै तयारी बसिसक्नुभएको रहेछ । सपथ लिदा पनि लाइनको अन्तिममा छु । मलाई त हामी तिनजना राज्यमन्त्री पो हो कि जस्तो पनि लागिरहेको थियो । शपथ खाइसक्यो तर कुन मन्त्रालय भन्ने अझै थाहा थिएन । पछि पत्र प्राप्त भयो त्यो पत्रमा पनि मन्त्रालय उल्लेख छैन । अन्तिम समय शपथ ग्रहणमा बोल्ने बेलामा पो महिला बालबालिका मन्त्रालय भन्ने थाहा भयो । अनिमात्रै कौतुहलता मेटियो ।
तपाईले अघि नै भनिसक्नुभयो, पहिलो महिला मधेशी समुदायको प्रतिनिधित्व भएको छ, ती समुदयका लागि चाहि तपाईको भूमिका के रहन्छ ?
मधेशी महिलाको जीवनस्तर उकास्ने कार्यमा त मेरो भूमिका सधै रहदै आएको छ । उनीहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पछौटेपन हटाउने कार्यमा मेरो प्राथमिकतामा पर्छ ।